Eeg muuqaalka la soo jeediyay ee laga saaray - dadka - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Eeg goobta la soo bandhigay ee laga saaray - dadka
Eeg goobta la soo bandhigay ee laga saaray - dadka
Disney ayaa ka qaaday filimka cusub ee filimka "Toy Story 2" oo muujinaya mid ka mid ah jilayaasha muuqaalka ah ee sameynta faallooyin soojeedin galmo ah.
"Bloopers" dhamaadka hudheelka hindida, oo laga sii daayay 1999, oo noqday kaalin weyn oo loogu talagalay Pixar iyo Disney.
Waxay ku taallaa dabeecadda Stinky Pete ku sameysey faallooyin soo jeedin ah oo la xidhiidha lab ah Barbie carruureed, ka hor intaan la ogaanin inuu ku sawiranyahay kamaradaa oo si dhamaystiran u dhammaatay wadahadalka. Afar sheeko "Toy Story" ayaa waxaa ka mid ahaa riwaayado been abuur ah oo ku saabsan dhibcooyinka xiran.
Taageerayaasha ayaa ogaaday in goobta ay ka maqnaayeen filimkii ugu dambeeyay ee filimka, oo la sii daayay horraantii sanadkan. Taa baddalkeeda, rukunku wuxuu isla markiiba u tagayaa kaaliyaha xiga.
The duntu ka mid ah, feedh dhaceen dhamaadka filimada ugu horeysay ee Pixar tusi characters sida jilayaasha filimka iyo soo bandhigaan haydh khadadka, qosol iyo daqiiqado faran ay. . Waxay inta badan nuurka ku daatay oo ka filimada iyo warshadaha Hollywood oo dhan.
Muuqaalkii la tirtiray, Stinky Pete, oo ah nin lid ku ah, wuxuu leeyahay laba Barbaarood: "Miyaad aad isku mid tahay?"
Ka dibna wuxuu stroked gacanta mid ka mid ah ayaa yiri: ". Waxaad og tihiin, hubi in aan ka caawin kara in aad u ciyaaro Toy Story 3 Waxaan ahay" Pete markaas ogaaday waxa la duubay oo u muuqday raaxo, si degdeg ah u dhaqaaqin wadahadalka.
John Lasseter, agaasimaha "Toy Story 2" ayaa lagu soo oogay dembi galmo. Waxa uu ka tagay Disney sannadkii hore ka dib markii uu ku tilmaamay "qalad" taasoo ka dhigtay qaar ka mid ah asxaabtiisu in ay dareemaan "ixtiraam la'aan iyo raaxo la'aan".
Iyadoo dhaqdhaqaaqa #MeToo sagxada-up iyo eedeymaha ka dhanka ah filimka Kambayuutarada Harvey Weinstein ah, iyagoo kabka Oo weliba, Weinstein, co-aasaasaha shirkadda wax soo saarka Miramax, ayaa lagu eedeeyay in ay dumar badan in ay ka go'an falalka galmada la rabin.
horumarka iyo tijaabooyinka bisha Sebtembar ee loogu talagalay weerar galmo iyo kufsi. Wuxuu ka codsaday inuusan dambi galin dhammaan eedeymaha waxaana uu beeniyay dhammaan eedeeymaha kufsiga.
"Toy Story 4", filimkii ugu dambeeyay ee xayeysiiska, ayaa la sii daayay bishii hore.
CNN waxay la xiriirtay Disney, oo iibsatay Pixar 2006. ee faallo ah
The-CNN-Wire ™ iyo © 2019, Network News Network, Inc., Shirkadda Time Warner. All rights reserved
Dad: Waxay leedahay ey! Celine Dion wuxuu soo bandhigayaa lugaheeda quruxda badan ee quruxda badan ee ka baxsan Paris
Nin loo xiray weerarka galmada ka dib markii uu qof ku dhexjiray makhaayadda makhaayadda - Oil City Casper News, Wyoming Community News Stream.